Bit By Bit - Lamesa fiaraha-miasa - 5.5.2 Leverage heterogeneity
Rehefa ianao no nahatonga be dia be ny olona hiasa amin'ny tena olana ara-tsiansa, ianareo dia hahita fa ny mpandray anjara dia ho heterogeneous tamin'ny fomba lehibe roa: izy ireo dia miovaova arakaraky ny fahaizana, ary izy ireo dia miovaova arakaraky ny haavon'ny ny ezaka. Ny fanehoan-kevitra voalohany ny maro mpikaroka ara-tsosialy dia ny manilika ambany kalitao mpandray anjara, ary avy eo miezaka ny manangona ny raikitra habetsaky ny vaovao avy ny olona rehetra sisa. Izany no fomba diso hanao ny mari faobe tetikasa fiaraha-miasa.
Voalohany, tsy misy antony ny manilika ambany mahay mpandray anjara. Tamin'ny antso misokatra, ambany mahay mpandray anjara tsy miteraka olana; ny fandraisana anjara tsy handratra na iza na iza, ary tsy mitaky fotoana hanombanana. Amin'ny olombelona computation sy nizara fanangonana antontan'isa tetikasa, amin'ny lafiny iray hafa, ny tsara indrindra amin'ny teny dia tonga amin'ny alalan'ny fanaraha-maso kalitao leon'ny, tsy fisotroana avo ho fandraisana anjara. Raha ny marina, fa tsy fanilihana ambany mpandray anjara fahaiza-manao, fomba tsara kokoa dia ny hanampy azy ireo hanao fanomezana tsara kokoa, be dia be tahaka ny mpikaroka ao amin'ny eBird nanao.
Faharoa, tsy misy antony tokony hanangona ny raikitra habetsaky ny vaovao avy amin'ny mpandray anjara tsirairay. Ny fandraisana anjara amin'ny fiaraha-miasa faobe maro tetikasa dia mampino mitovy (Sauermann and Franzoni 2015) miaraka amin'ny vitsy ny olona mandray anjara betsaka, indraindray antsoina hoe ny saborany lohany -ary be dia be ny olona mandray anjara kely-indraindray antsoina hoe ny rambony lava. Raha tsy fanangonana vaovao avy amin'ny matavy lohany sy ny rambony lava, ianao no nandao taonina ny vaovao uncollected. Ohatra, raha Wikipedia nanaiky 10 ihany 10 fanovana isaky ny tonian-dahatsoratra, dia ho very ny 95% ny fanovana (Salganik and Levy 2015) . Noho izany, miaraka amin'ny fiaraha-miasa faobe tetikasa, dia tsara indrindra ny leverage heterogeneity fa tsy miezaka ny hanafoanana azy io.